order - နှုတ်ကပတ်တော်ဖောင်ဒေးရှင်းမှ•စာအုပ်များ, အသံ, မဂ္ဂဇင်းများနှင့်ထို့ထက် ပို.
စာအုပ်များ, Ebooks နှင့်အသံ
Percival စာအုပ်များကိုကျွန်ုပ်တို့၏အီလက်ထရောနစ်ပုံစံဖြင့်ရရှိနိုင်ပါသည် Ebooks စာမျက်နှာ.
Thinking and Destiny Audiobook (USB Flash Drive, MP3 format)
The Word Foundation ၏အသင်းဝင်အားလုံးသည်မည်သည့်ထောက်ပံ့မှုကိုသင်ရွေးချယ်ပါစေကျွန်ုပ်တို့၏သုံးလတစ်ကြိမ်မဂ္ဂဇင်းဖြစ်သော The Word နှင့် Percival စာအုပ်များတွင် ၄၀% လျှော့စျေးရရှိလိမ့်မည်။ သင်သည်အသင်း ၀ င်ဖြစ်လိုပြီးသင်၏အမှာစာတွင်အထူးလျှော့စျေးကိုရယူလိုပါကသို့မဟုတ်အသင်း ၀ င်ဖြစ်လျက်နှင့်အထူးလျှော့စျေးကိုအသုံးပြုလိုပါက ကျေးဇူးပြု၍ ကျေးဇူးပြု၍ ပါ။ ဆက်သွယ်ရန် ချက်ခြင်း၊ ဖုန်းသို့မဟုတ်ဖက်စ်မှတစ်ဆင့်သင်၏မှာကြားမှုကိုပြုလုပ်ရန်
The Word Foundation သည်နှစ်ပေါင်း ၇၀ ကျော်အတွင်း Harold W. Percival ၏လက်ရာများကိုအမှန်တရားကိုရှာဖွေသူအားလုံးအတွက်ရရှိစေရန်ကတိပြုခဲ့သည်။ သင်၏အလွန်တန်ဖိုးထားသည့်လှူဒါန်းမှုသည်ကျွန်ုပ်တို့၏လက်လှမ်းမီမှုကိုချဲ့ထွင်ရန်နှင့်စာအုပ်များ၏ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေမှု၊ အီလက်ထရောနစ်ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေရေး၊ ကြော်ငြာခြင်းနှင့်ထောင်တွင်းအကျဉ်းသားများ၊ စာကြည့်တိုက်များနှင့်မတတ်နိုင်သောသူများအားအခမဲ့စာအုပ်များကိုထောက်ပံ့ခြင်းစသည့်ကျွန်ုပ်တို့၏အရေးကြီးသောကဏ္areasများစွာကိုလည်းအထောက်အကူပြုလိမ့်မည်။
ကျေးဇူးပြု ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျ about:
သင်၏အလိုတော်တွင် Word Foundation ကိုမှတ်မိခြင်း